Momba anay - BOEDON INDUSTECH LIMITED
NY FANDAMINANA BOEDON dia voafetra
Ny Boegger dia nifantoka tamin'ny fanenomana tariby 15 taona maro tany Chine, ny meshes rehetra dia novokarina araka ny fenitra ASTM sy ISO, na mila takelaka na horonana ny filanao, Boegger dia afaka manome ny harato tariby avo lenta indrindra ho an'ny mpanjifa sy ny tetik'asa, tongasoa ny fepetra takinao manokana, ny filokana manokana, ary Boegger dia mety hamokatra ny prototypes na ny famokarana mandeha ara-potoana noho ny fandaharam-potoana fanamboarana miovaova.
Ny Boegger dia mamokatra indrindra: endrika vy maitso tsy misy fangarony, firavaka vy vita amin'ny metaly perforated, valin-drihana metaly voaravaka, ravina metaly nitarina, harato haingon-trano ho an'ny rindrina ivelany, fitaratra tariby, lambam-baravarankely, lambam-baravarana mihantona, lambam-baravarana vy, rindrina ambainy harato, harato harato fehin-kibo, ridao misy rojo, lambam-by vita amin'ny vy, sns., tongasoa ny mpanjifa vaovao sy taloha hanontany momba ny vidiny
Ny Boegger dia mifikitra amin'ny "hamorona lanja ho an'ny mpiara-miasa", ny soatoavina fototra amin'ny fahitsiana, ny fandeferana, ny fanavaozana, ny serivisy "ho fanahin'ny orinasa, hamoronana lanja ho an'ny mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny fanavaozana mahaleo tena sy fiaraha-miasa matotra.
Amin'ny famoronana lanja ho an'ny mpiara-miasa. "
Voafetra ny indostrian'ny Boegger, fa ny mpanjifa, mpamatsy, tompon-trosa, mpiasa ary ny fifandraisan'izy ireo manokana eo amin'ny singa sy ny olona izay mpiara-miasa aminy, ary amin'ny alàlan'ny ezaka hamoronana lanja ho an'ny mpiara-miombon'antoka fotsiny, mba hahatsapany ny sandany sy ny fidirany amin'ny fampandrosoana ary fahombiazana.
"Fahamarinana, fandeferana, fanavaozana, fanompoana"
Voafetra ny indostrian'ny Boegger. fa ny fahamarinana no fototry ny fiaraha-miasa rehetra, ny fandeferana dia fototry ny famahana olana, ny fanavaozana dia fitaovana iray amin'ny fampandrosoana ny asa ary ny serivisy dia fototr'izany hamoronana lanja.
Fitaovana maherin'ny 40
Mpiasa mihoatra ny 30
Matihanina mihoatra ny 20
(1) Ny rafitra fitaterana an-dranomasina, tany, rivotra ary lalamby feno dia mamaha ny olan'ny fitateran'ny mpanjifa.
(2) Omeo torolàlana momba ny fametrahana sy torolàlana momba ny fikojakojana (lahatsoratra sy horonan-tsary)
(3) Manampy amin'ny famahana ny olan'ny fonosana sy ny fahasimban'ny vokatra mandritra ny fitaterana.
(4) Araraoty tsara ny fitarainana.
(5) Vahaolana mety ny olan'ny fiverenana sy famerenam-bola.
(6) Manampy amin'ny fanamarinana ny politikan'ny vidin'ny vokatra eto an-toerana.
Izay rehetra ilainao mba hamoronana tranokala mahafinaritra